Ny Hubris an'ny Marketing Geocentric | Martech Zone
Ny Hubris an'ny Marketing Geocentric
Talata, Martsa 18, 2008 Alahady, Novambra 3, 2013 Douglas Karr
Copernicus no azo inoana fa rain'ny astronomia maoderina rehefa nilaza izy fa misy heliocentrism noho ny geocentrism. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ny masoandro no ivon'ny rafitry ny planeta fa tsy ny tany. Fanaratsiana olona izany ary nanohitra ny kolotsaina manam-pahaizana iray manontolo izay nifangaro tamina fivavahana izy tamin'izany. Fa marina ny azy.
Nampiasaina tamin'ny Marketing, manana ny olana isika anio. Noho ny antony sasany, rehefa mihabe ny orinasa dia manomboka mieritreritra izy ireo fa ivon'ny rafitry ny varotra ataontsika. Androany, naharay mailaka avy amin'ny Border on Border Rewards Perks aho - programa vaovao hampahafantarana ireo sisintany amin'ny orinasa hafa izay mety hiarahan'izy ireo miantsena:
Izaho a Sisintany mpankafy Tonga hatrany aho mandra-pisokafan'ny vatan'i Barnes sy Noble Sisintany saika isaky ny faran'ny herinandro. Tiako ny fivarotan'izy ireo, ny mozika mivantana ary ny kafe. Matetika aho no nandany ora maro tany miala sasatra sy namaky.
Toa nanitsy ny paikadiny tamin'ity iray ity ny sisintany - angamba manandrana mifanatrika Amazon. Ny fahasamihafana dia ny fametrahana toerana. Amazon dia nametraka ny tenany ho mpivarotra goavambe sy fizarana goavambe amin'ny fanovana ny fomba fanaovan'izao tontolo izao orinasa. Nanokatra fivarotam-boky ny sisintany.
hubris: avonavona na fahatokisan-tena tafahoatra; fieboeboana.
Tena mino aho fa hadisoana izany. Ny ivon'ny tontolon'ny varotra dia tsy manodidina ny fivarotanao fa manodidina ny mpanjifanao. Raha mahita anao toy ny fivarotana boky ny mpanjifa dia manohiza mampihatra loharano izay hanomezany valisoa anao indrindra. Mampidi-doza ity karazana fisainana ity ary mety hahafoana ny fifantohan'ny orinasanao ary fahefana ao amin'ity orinasa ity izy io. Raha te ho lasa zavatra hafa ianao dia mandehana manamboatra zavatra hafa!
Tsy hividy efitrano fandraisam-bahiny na akanjo amin'ny Border aho! Tsy misy dikany amiko ny valisoa raha manandrana mikapoka ahy ianao, toradroa, amin'ny lavaka boribory.
Tags: sisin-tanyvalisoa fetramailaka Marketing
Web 2.0 ho an'ny fampisehoana orinasa
Mampiseho làlana amin'ny Google Map miaraka amin'ny KML
Mar 18, 2008 ao amin'ny 7: PM PM
Hevitra lehibe indray Douglas. Heveriko ihany izany zavatra izany rehefa mahita ny olona mitarika ny atiny amin'ny faritra jeografika aho. Izany dia toy ny fitsanganana manoloana an'izao tontolo izao miaraka amin'ny mikrophone ary tsy miresaka afa-tsy amin'ny laharana voalohany ihany.
Mibilaogy manerantany, misotroa eo an-toerana!
Hampiasa an'io aho, Dave! Tiako!
Mar 19, 2008 ao amin'ny 6: PM PM
Karazana toa an'i McDonald manompo Lattes, raha tsy misy tsiro burger… lol
Mar 19, 2008 ao amin'ny 7: PM PM
Raha niresaka momba an'iza… no nahitanao an'izany Ny kafe an'i McDonald dia nanana hevitra tsara kokoa noho ny Starbucks?
Andraso fotsiny - efa an-dàlana ny Starburgers. Manantena aho fa tsy hodoran'izy ireo koa.
Mar 19, 2008 ao amin'ny 8: PM PM
May 6, 2008 ao amin'ny 5: 04 PM
“Karazana McDonalds manompo Lattes, raha tsy misy tsiro burger? Lol”
Hey, any Goatemalà, McDonalds dia manana "McCafe". Efitra misaraka nampiana an'i McDonalds izy io, ary mandeha tsara ny quitre. Tena tian'ny olona izany. Starbucks tsy afaka manao azy ho lafo 9too, ary Goatemalà no niavian'ny kafe tsara).
Zahao ny tranokalanay ho an'ny famerenako ny lohateninao.